DEG-DEG: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Guuleystaha Abaalmarinta Xiddigii Ugu Fiicnaa Kooxdeeda 2019-20 & Lionel Messi Oo Lagu Garaacay - Gool24.Net
DEG-DEG: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Guuleystaha Abaalmarinta Xiddigii Ugu Fiicnaa Kooxdeeda 2019-20 & Lionel Messi Oo Lagu Garaacay
Kooxda ree Spain ee Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday ciyaaryahanka kooxdeeda ee ku guuleystay abaalmarinta Aldo Rovira ee xiddigii kooxdeeda ugu soo fiicnaa xilli ciyaareedkii 2019-20.
Abaalmarintan ayaa la bixinayaa sanadkii 11-aad waxaana sameeyay agaasimihii hore ee Barcelona ee Josep Lluis Rovira si uu ugu sharfo wiilkiisii Aldo oo sanadkii 2009 lagu dilay shil mooto isaga oo 37 sano jir ah.
Abaalmarinta ayuu ku guuleystay goolhayaha ree Germany ee Marc Andre Ter Stegen, abaalmarinta ayaa lagu shaaciyay qaab kulan Online ah oo ay ku kulmeen Rovira, wiilkiisa Borja iyo waliba madaxweynaha kooxda ee Josep Maria Bartomeu.
Ter Stegen ayaa abaalmarintan ku garaacay kabtanka kooxdiisa ee Lionel Messi kaddib markii uu in badan soo badbaadiyay Blaugrana xilli ciyaareedkii hore oo u ahaa mid madaw oo ay koobab la’aan baxeen.
Messi ayaa marka laga yimaado inuu sanadkan waayay isagu ah ciyaaryahanka haystay abaalmarinta inta badan sanadihii ugu dambeeyay kaddib markii uu kusoo guuleystay lix kamida tobbankii ugu dambeeyay.
Sanadkan ayaa ah markii ugu horreysay ee goolhaye ku guuleysto abaalmarinta Aldo Rovira iyo markii labaad ee xidhiidh ah ee uu Messi waayo maadaama oo uu sanadkii horena Gerard Pique kusoo guuleystay.